Ny polisy iray izay ratsy kokoa noho ny Nazi Alemanina dia mivelatra toy ny amboadia mitafy lamba volon'ondry ary tsy hitanao izany: Martin Vrijland
Ny polisy iray izay ratsy kokoa noho ny Nazi Alemanina dia mivelatra toy ny amboadia amin'ny lamban'ny ondry ary tsy hitanao izany
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 14 Novambra 2019	• 21 Comments
Eto an-dàlana ho any amin'ny fanjakana polisim-pirenena izay mampihatra ny lalàna voalohany amin'ny alàlan'ny fihetsika isika, ary avy eo manitsy izany lalàna izany. Ny mpisolovava sasany an'ny PsyOp dia nifindra tany amin'ny ilan'ny latabatra taorian'ny asa niarahan'ny fiaraha-miasa tamin'ny hetsika ara-tsaina (amin'ny maha-mpiaro ny mpisehatra navela handray anjara amin'ny lalàna vaovao) ary lasa mpitsara PsyOp. Ireo mpitsara ireo dia manana andraikitra amin'ny fametrahana lalàna vaovao, izay azo anaovana ny lalàna.
Bart Stapert ohatra tsara avy amina mpisolovava iray izay navela voalohany hanampy kriminal amin'ny proxy ho lasa vavolombelona satroboninahitra ary afaka mandresy lahatra ny olona ho mpitsara. Ny iray amin'ireo mpanjifany farany dia vavolombelona nanam-boninahitra Nabil B., izay rahalahiny tsy meloka dia voatsatoka tamina 2018 (araka ny làlana fitantarana). Nabil B. no vavolombelona voalohany tao amin'ny fitsarana momba ny tontolon'ny zava-mahadomelina ao Amsterdam. Ny tontolon'ny zava-mahadomelina izay azonao ampitahaina amin'ny fomba nanoratan'i Etazonia tamin'ny alàlan'ny Al Qaeda taloha, sy ny fomba niarahan'i Syria sy ny maro hafa niasa niaraka tamin'ny tafika mpomba mba hanafoana ny firenena hamorona ny alibi ho an'ny fidirana an-tsehatra mafy. Ny tontolon'ny zava-mahadomelina ao Amsterdam, ilay antsoina hoe Mocro Mafia, dia mety ihany koa ho tafika mpomba an'ny tenany. Ny Amsterdam Mocro Mafia dia IS of the AIVD; ny tafika proxy an'ny fanjakana holandey, hampiditra ireo fepetra vaovao ataon'ny polisy. Mamorona korontana ny tenanao, ka mila miditra an-tsehatra mafy ianao.
Ny heloka bevava proxy Mocro-mafia dia toa mila miasa mba hiantohana fa ny fepetra raisin'ireo polisy mahatsiravina antsoina hoe 'satroboninahitra "dia eken'ny rehetra. Ny fisian ny fitsipiky ny satroboninahitra dia manome antoka fa afaka manangona fijoroana ho vavolombelona manokana amin'ny heloka rehetra ny fanjakana. Ilay fijoroana ho vavolombelona nomena an'io dia mety hanjavona ao anaty anarana tsy fantatra. Ny asa fanaovan-javatra dia mety ho tanterahana hatreto ka mety tsy ho faty akory ny anaran'ilay vavolombelona, ​​fa raha tsy izany dia hovonoina ireo olona ao amin'ny fianakaviana sy ny mpisolovava. Avy eo azonao atao ny mamela ny olona rehetra ao ambadiky ny barany amin'ny fijoroana ho vavolombelona avy amin'ny vavolombelona tsy fantatra anarana.
Io dia tsy misy afa-tsy ny sisiny avy any izay handefasana azy io izao. Tsy te hahita izany ve ianao? Avy eo ianao mbola manana ny lohanao amin'ny fasika. Ity foto-kevitra momba ny satroboninahitry ny satroboninahitra ity dia efa natsangana tamin'ny alàlan'ny heloka bevava mpiaro an'i Willem Holleeder, fa ny asa mihetsika dia tsy maintsy hatsangana amin'izao fotoana izao izay hinoan'ny asan'ny lalàna azy. Ankoatr'izay, raha tena te hanafaka ny olona mora sy mora ianao, dia tsy te-hitafy ireo programa fiarovana rehetra ireo. Tsara kokoa raha ekena fa ny fijoroana vavolombelona amin'ny satroboninahitra dia afaka mijanona tsy fantatra anarana mandritra ny dingana iray manontolo. Raha tsy mahomby ilay izy, dia esory fotsiny ireo programa miaro lafo vidy any amin'ny vilan'ny hetra. Ary mihevitra fotsiny izahay fa momba ny fanakatonana ireo mpanao heloka bevava mahatsiravina izany. Tsia, angamba mpamono olona izay nandray anjara tamin'ny skoto-sarimihetsika fandidiana ara-tsaina (PsyOp).
Amin'io hetsika io ihany (raha hazavaina ao ny lahatsoratra teo aloha) Mandritra izany fotoana izany dia tokony hovaina ihany koa ny fahazoan-dàlana amin'ny fiarovana (ireo izay te-hahazo ny fanjakana). Nanana vola be lavitra ny vola azon'ny olona toa an'i Willem Holleeder. Izany dia nitranga tamin'ny 'fanampiny' ary noho izany ny vidin'ny mpisolovava no voaloa daholo. Eny, io indrindra no tanjon'io fihetsika io tamin'ny alàlan'ny mpanao heloka bevava toy izany. Nila vola be ilay izy, ka hoy ny fanjakana:Tsy azo atao intsony izao. Azontsika atao tsara kokoa ny mampiasa io vola io ho an'ny fandaharan'asa miaro manodidina ny vavolombelona amin'ny satroboninahitra na mpisolovava azy".
Raha tsorina dia ny habaka rehetra noforonina ho fanidy ny zava-drehetra sy ny olona rehetra ahafahan'ny fanjakana mametraka heloka amin'ny kiraro. Tsy voatery ho heloka bevava tsy misy intsony izany, satria tsy mila manome porofo manohana anao raha manana vavolombelona satroboninahitra. Ny NFI dia afaka manoratra tatitra voatondro ary ny satroboninahitra satroboninahitra dia manamboatra ny fehezanteny namboarina ho toy ny vongana mahafinaritra ho an'ny fanjakana. Avy eo ianao dia afaka mikotrana ny heloka bevava sy ny vavolombelona ivelan'ny ankibeninao, satria tsy fantatra anarana ny zava-drehetra ary ao ambadiky ny varavarana mihidy. Ny fanombohan'ny fanjakana polisy mahatsiravina! Tsy izay ihany anefa.
Ahoana ny momba ny fanesorana ireo mpisintaka amin'ny fiarahamonina amin'ny alàlan'ny fitsaboana ara-tsaina azy ireo? Nosoratako tamin'ny an-tsipiriany izany ity lahatsoratra ity. Tena zava-dehibe ny famakianao tsara izany ary avelao izy hanindrona anao. Izany dia satria mety hisy fiantraikany amin'ny tenanao anio na rahampitso. Mety hikasika anao izany; mety hisy fiantraikany amin'ny zanakao izany. Izy io dia momba ny fanitarana ny fanaraha-maso amin'ny toe-javatra mety hamily ny hevitra voalaza fa fihetsika mety hisavoritaka. Nanatanteraka izany ny PsyOp 'Ruinerwold' fianakaviana. Vakio indray ny lahatsoratra sy ny fanehoan-kevitra rehetra fipihana ny rohy.
Hitantsika ny laharana mifarana amin'ny karazan-tany rehetra. Ny fandaharam-pivoriana dia manjary tsy maintsy atao. 5G dia ho avy. Mazava ho azy fa mahita ny fanoherana eo amin'ny lafiny rehetra isika, saingy zava-dehibe ihany koa ny ahitanao izao fa saika ny fanoherana rehetra dia nalamin'ny fanjakana mihitsy, mba hampitana izany. Ny ankamaroan'ny hetsi-panoherana dia mikendry ny mpitarika politika, fa ireo mpitarika politika ireo dia tsy misy afa-tsy ny tanjona 1 ary: manosika ny zavatra rehetra amin'ny lamasinina haingana.
Ny tanjon'ny fanoherana mandamina tena dia ny manafina ny tena olana amin'ny alàlan'ny fanodinana ny saina sy ny fiantohana hatrany fa tsy milamina ny zavatra. Izany dia momba ny fandefasana fanoherana avy amin'ny fiaraha-monina. Raha afaka mandefa izany ianao, dia afaka mandefa ilay sambo. Ao amin'ny ahy boky vaovao Manazava amin'ny an-tsipiriany aho ny fomba fiasan'ny mpanohitra mifehy azy io sy ny fomba fanamboarana ny fitaka rehetra. Tena zava-dehibe ny avoaka io fampahalalana io ankehitriny. Fotoana izao handraisanao andraikitra ary apetraho amin'ny fianakavianao, olom-pantatra na namanao. Tsy afaka miandry intsony isika. Mihidy ny vavahadin'ny polisy ary ny zava-drehetra dia hita ao amin'ny palitao tsara tarehy 'fikolokoloana' sy 'fanampiana'.
Ny sarimihetsika fampielezankevitra etsy ambany dia mampiseho ny fomba nanolorana ireo toby fitanana (izay manankarena ankehitriny any Holandy) nahazo endrika feno fitiavana sy feno fiahiana. Ny fihetsika milamina dia manome ny fahatsapana fa milamina sy feno fitiavana izany. Nataonao izany tamin'ny mpisehatra sy ny jiro tsara tarehy am-ponjao sy ny famokarana mamy an'ny lehilahy miloko maizina. (Jereo sy vakio kokoa eo ambanin'ny lahatsary)
Ilaina ny fitondrana "40 /" 45 hanehoana ny saro-pantarina. Taorian'io ady io dia notohizan'ny andian-tsarin'ny vondronabergberg, napetraky ny lehibentsika Bernhard, ny fantsom-pahefana izay nanampy sy nanohana an'i Adolf Hitler. I Hitler dia navela ho lasa fahefana mialoha mba hahafahana manadio ny saha tahaka ny efa nomanina ihany koa, mba hahafahan'ny sehatra mitovy hery ao ambadiky ny fitsanganany sy ny fianjerany, dia ahafahana manangona ireo fotokevitra fototra mitovy fientan-tena amin'ny pretra demokratika sy somary. Ny tondrozotra mankany amin'io fanjakana super EU io dia namboarina tamin'ireny fivoriana voalohany an'i Bilderberg ireny.
Nandalo ny fotoam-polo taona, saingy ny toeran'ny fifantohana sy ny famerenana indray dia vonona hameno amin'ny habetsaky ny olona tsy mitovy hevitra amin'ny finoanoam-poana. Tsy ho ela ireo olona ireo dia mifandray amin'ny marika havanana (anglisy: 'elatra ankavanana') amin'ny alàlan'ny famoronana marika marika ary mifamatotra amin'ireo mpitondra ara-politika malaza izay namorona io marika io. in ity lahatsoratra ity Manazava aho hoe ahoana no nahatonga an'io fifamatorana tamin'i Donald Trump io, Boris Johnsen ary (any Holandy) mpanao politika toa an'i Thierry Baudet. Ao amin'ny ahy boky vaovao Hamariniko momba izany. Amin'ny alàlan'ny famoronana alahelo ara-toekarena tsy ho ela ary famoronana korontana, azonao atao ny miatrika izany vondrona rehetra izany ao amin'ny 1x. Manomboka izao, ny eritreritra mitsikera dia zavatra mitaky fampianarana indray. Manana fisalasalana amin'ny fanoherana mpanohitra ianao avy eo. Izany tokoa! Ny famaritana an'izany "gangguan" izany dia efa natsangana. ny psikolojia efa eo vonona.
Fotoana izao hahitanao ny mombamomba anao. Ny lalàna sy ny fitsipika rehetra dia tsy mba hiarovana anao, fa hiaro ny finoanoam-poana fasista mitombo (amin'ny palitao mamy: ny amboadia amin'ny fitafian'ny ondry) hamelezana anao; hamelezana ny vahoaka. Ny olona dia naka fotoana hanofana taranaka momba ny 'mpikarakara' sy 'polisy'. Rehefa dinihina tokoa, ireo manana tanora dia manana ny ho avy ary raha manomboka manomboka atidoha ianao, azonao atao ny mametraka am-bava ny 'mpiandry' sy ny 'mpiasa' rehetra izay resy lahatra fa tsara ny manidy ireo olona rehetra ireo. Ny fahajambatanana iraisana dia vokatry ny fandaharam-pampianarana nandritra ny am-polony maro, fampianarana, haino aman-jery ary hetsika avy amin'ny politika. Fotoana tokony hahitanao ny haavon'ny fitaka rehetra. Noho izany dia tiako ny hiantso anao haingana, ny bokiko mamaky sy manome izany amin'ny ankohonana, namana na olom-pantatra. Eo amin'ny taratasy sy ny taratasy dia tsy mora ny manivana noho ny Internet.
Farany ilay video eto ambany. Ao anatin'izany ianao dia mahita ny iray amin'ireo andian-tafika marobe izay naorin'i Eoropa mba hiarovana ny tenany amin'ireo mpanani-bohitra rehetra. Manoro hevitra aho fa hijery tsara amin'ilay horonan-tsary eto ambany ianao dia avy eo manontany tena raha ho avy ny andro iray tokony handosiranao fitondrana pasista, nefa tsy afaka mandeha na aiza na aiza ianao, satria daholo daholo ireo fencing ireo ary ny ranomasina rehetra dia misy fanaraha-maso amin'ny sambo, drôna ary helikoptera. Hiara-hiasa ve ianao raha tonga eo amin'ny sisiny ny fitsaboana? Handray ny fifangaroan-kafatra tsara ve ianao alohan'ny hisakafoanana amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny varavarana finday? Sa mihevitra ianao tsy handeha haingana be?
Lisitry ny rohy momba ny loharano: https: nporadio1.nl
Tags: advocaat, Bart, Alemaina, EU, Featured, fefy, fanampiana, satroboninahitra vavolombelona, Nabil B., nazia, psycho Lance, Stapert, care
Chekinah nanoratra hoe:
14 Novambra 2019 ao amin'ny 10: 53
Mazava indray ny lahatsoratra Martin, alahelo fotsiny fa tsy hitan'ny ankamaroan'ny olona ny maha-ratsy azy. Raha mbola tara loatra ary tsy azo alaina intsony ny sidina hoy izy ireo ... rahoviana no nanapa-kevitra ny rehetra ary tsy nahita ny nahatongavan'izany rehetra. Ny tena fitenenana marina dia avy eo ... Tsy te hahita an'io ho avy izahay. Tsy ho anao izany, mihevitra aho fa ampy ny fampitandremana.
14 Novambra 2019 ao amin'ny 19: 06
Tsy maintsy efa zatra isika ny hanafika ny toerana rehetra ny mpitandro ny filaminana na aiza na aiza. Miambina mavesatra ary miaraka amin'ny antony matanjaka foana .. Na raha misy mpampihorohoro ao anaty lamasinina na misy olona avy ao amin'ny Mocro Mafia .. Mety ho tonga indray i Grapperhaus (ao ambadiky ny karazany 65 karazan-jiro fatra-pitiavana taloha atsinanana) miaraka amina antony voamarina tsara:
14 Novambra 2019 ao amin'ny 19: 16
Matahora vetaveta .. Ny tetika Gladio. Ady maharitra ho an'ny fandriampahalemana mandrakizay. Avelao izy ireo hanosika ireny zazalahy ireny, mpandray anjara manerantany. Aiza isika no tsy hanana azy ireo?
15 Novambra 2019 ao amin'ny 21: 53
Betsaka kokoa! Ny polisy misimisy kokoa satria tena ilaina !!
14 Novambra 2019 ao amin'ny 10: 56
Ary tsy afaka mivoaka aty aoriana ianao ...
15 Novambra 2019 ao amin'ny 11: 25
Eny, izany no tetika, miaraka amin'ny EUROGENDFOR sy Von der Leyen eo amin'ny toerany ho Verteidigungsministerin teo aloha. Macron, Tusk sy ny olon-kafa avy amin'ny Politburo izay manontany ny fananganana ny OTAN amin'izao fotoana izao sns sns
Wir kämpfen: für Deutschland! Ary firenena lehibe iray Eropa (vakio ato ny Reich fahefatra)
14 Novambra 2019 ao amin'ny 16: 05
Raha ny fahitako azy izao dia efa ao anaty jadona jadona daholo isika, fa polisy ihany koa. Mandehana ankehitriny, izahao ny zonao lazaina, marika lalàna izay ahafahanao manonona azy ireo tsara kokoa, miantso azy, ny fahalalahana maneho hevitra, ohatra. Ho hitanao amin'ny fampiharana fa tsy afaka milaza ny zava-misy ianao. Ary raha eo anoloanao zazalahy amin'ny script ianao, dia ho voahitsakitsaka ny zonao raha tsy mifanaraka amin'ny tovolahy ny fiafarany, mifanipaka amin'ny politikan'ny ankizilahy. Ny asa an-gazety dia tsy asaina raha toa ka voatery rakotra. . Tsy hita isa ny fanamelohana ny tovolahy avy amin'ny mpitsara amin'ny soratra izay tsy misy marina sy ny lalàna. Izany ny didy jadona, izany dia tsy ara-dalàna, fa tsy fahatokisana ara-dalàna. Fantatr'ireo tovolahy avy amin'ny mpisolovava amin'ny script koa fa anisan'ireo ankizilahy ireo avy amin'ny satan'ny script izy ireo ary mahazo vola ihany koa. Inona no azonao atao amin'ny lehilahy avy amin'ny fanambarana momba ny soratra. Amin'ny fangatahana antso, Iza no hihaona aminao ao avy amin'ireo mpitsara script. Andramo ny Fitsarana Eoropeana momba ny Zon'olombelona ao Strasbourg. Eny, izy ireo koa ry zareo avy amin'ny script. Ary ny zava-drehetra dia arahin'izy ireo miaraka amin'ny fepetra raha izany no mahaliana azy. Raha mitondra fitsarana manohitra ankizilahy iray avy amin'ny pejin'ireo antoko hafa ianao dia saika very tokoa ianao. Izany dia tena jadona momba ny vahoaka tsotra noho ireo tovolahy.
14 Novambra 2019 ao amin'ny 16: 39
Manaiky aho ... ary ny zava-dehibe kokoa dia ny fahitana amin'ny alàlan'ny fitaka rehetra. Tamin'izany boky izany.
14 Novambra 2019 ao amin'ny 16: 53
Tsy afaka miandry ny Rahavavy Naomi Hoogeweij ... Ity karazana andrim-panjakana ity dia manana fiantsoana ny malahelo, fiaraha-monina ary mpivavaka hafa mitovy aminy.
14 Novambra 2019 ao amin'ny 18: 49
Tsy asa tsara ve izany? Inona no resahinao? Izy io dia "fikarakarana"! Marina!
14 Novambra 2019 ao amin'ny 19: 50
Mandoa vola koa! Afaka mividy trano mahafinaritra ianao. Ny fepetra momba ny asa faharoa sy ny sisa.
14 Novambra 2019 ao amin'ny 20: 02
Eny, tsy azoko ihany koa ny fisavoritaka. Mpiasa tsara ny serivisy ao madurodam, tsy manahy momba izany 😀
5 Desambra 2019 ao amin'ny 01: 28
Jereo ity horonantsary ity fa ny fanjakana shinoa dia manolotra andrim-panjakana hikarakara (tobim-pianarana fanabeazana) tsara kokoa (toa ny horonantsary AVRO / TROS) noho ny zava-misy:
14 Novambra 2019 ao amin'ny 19: 52
Ny "care transcultural" dia tsy toerana tsara ho an'i Naomy Hoogewij ve? Misy ifandraisany amin'ny trans ..
14 Novambra 2019 ao amin'ny 20: 25
Araka ny mamaritra ao amin'ny bokinao, misy fefy manodidina ny tany am-boalohany hatramin'ny voalohany (eto amin'ity tontolo dualistana ity). Izany rehetra izany dia efa niseho daholo, afaka mahita an-taonany maro isika izao. Tsy ny vavahady ihany no aorina, ahoana ny faharetan'ny fanaovana visa? Ireo rehetra ireo dia novaina tato anatin'ny taona vitsy lasa izay hany ka sarotra kokoa / tsy afaka miala intsony. Manomboka amin'ny hetra sidina izany ary ny dingana manaraka dia ny fandavana.
Araka ny nolazain'i Zonnetje, dia miankina amin'ny tahotra porno izany. Na dia napetrany ao amin'ny tranomaizina kely indrindra aza izy ireo, raha mbola fantatry ny tany am-boalohany fa afaka isika, ny zava-drehetra eto amin'ity tontolo ity.
Ankoatr'izay, aleoko kokoa fa napetrak'izy ireo tao am-baravarana noho ny nametrahako olona tao am-ponja. Izany no tsy fitovian'ny olona tariharin'izao tontolo izao na ny niaviany!
Raha maharesy izy eto dia ho ambony noho ny zavatra rehetra ianao.
14 Novambra 2019 ao amin'ny 22: 31
Tsia, very saina daholo isika. Ao ny fanjakana mba hiarovana ny olom-pirenena. Ary izao dia samy tsy mahomby izy. Ny fametrahana ny lalàna sy ny lalàna manaraka dia ho tombontsoan'ny olom-pirenena ...
15 Novambra 2019 ao amin'ny 00: 02
Haha eny tena .. fa tena malefaka izany! Ny sarimihetsika ratsy iray matetika no tsara eo ambanin'ny vahoaka.
Marga nanoratra hoe:
15 Novambra 2019 ao amin'ny 07: 32
@ Sun, napetranao tsara ary marina ianao raha marina.
Isika rehetra dia afaka mahita izay mitranga, saingy amin'ny maha olom-pirenena tsotra dia tsy afaka manao betsaka momba an'io ianao.
Afaka nanapa-kevitra isika fa tsy ho mpamatsy organika, tsy hifidy, fa tsy hanao asa manimba ny olon-kafa ary momba izany ..
Fanoherana, fanodinana, amin'ny antso,? Ny mpiandry dia manamarina ny sakafony, izay mamaritra ny karama.
Tsy hanomboka hanohitra ireo lehilahy ao amin'ny script ianao.
15 Novambra 2019 ao amin'ny 07: 46
Hoy aho hoe: fotoana hamakiana ilay boky ary ho hitanao indray fa toa mihamiratra kokoa noho ny eritreritrao. Afaka manao zavatra ianao!
15 Novambra 2019 ao amin'ny 12: 34
Ny voalazako momba ireo zazalahy ao amin'ny script dia tena zava-misy marina. Azo antoka fa tsy midika izany fa tsy misy zavatra azo atao momba izany. Manomboka mamantatra raha misy zavatra diso, tsy fahatomombanana, tsy rariny ary tsy rariny. Miaina ny fihetseham-po ary aza manelingelina azy ireo. Tadidio foana. Aza avela hanenika anao ny fihetseham-ponao. Tsy tia fihetseham-po ireo ankizilahy, tokony hosazina daholo ny angovo, ny fitaomam-panahy. Nandeha izy ireo. Raha misy zavatra voalaza na vita, na aiza na aiza na avy amin ny olon-kafa, andramo fantarina raha ny fampahalalana avy amin'ny loharanon'ireo tovolahy ao amin'ny script. Ataovy mitovy amin'ny olona mifanerasera aminao ary manontany tena ianao hoe, ity koa dia anisan'ireo bandy ireo. Miezaha mampahafantatra ny olona mitovy hevitra, mifampizaha ary mifampionona tsy tapaka ary hazavao ny antony mahatonga antsika ao anatin'ny toe-javatra iainantsika. Miambena ianao satria ireo ankizilahy koa dia manaron-tena ho toy ny manana saina! Tena chamaleons izy ireo.
Betsaka ny zavatra ambara momba azy ireo nefa mamaky ato amin'ity tranonkala ity izy ireo.
19 Novambra 2019 ao amin'ny 00: 17
Ohatra lehibe iray hafa amin'ny olana, fanehoan-kevitra, vahaolana.
Ny vaovao mihoa-pampana mandritra ny lalao baolina kitra sasany dia voalaza betsaka amin'ny vaovao. Ny lalao PRS dia lazaina amin'ny fofonaina iray.
Olana: hiraina nefa tsy ho fantatra izay tena marina
Fihetseham-po: mahamenatra! Tsy maintsy saziana ireo olona ireo!
Vahaolana: ampahafantaro ny lalao eo amin'ny lalao baolina kitra
Jereo ny fampitana ny fandaharana "iray androany" amin'ny 18-11-2019 amin'ny minitra 4 etsy ambany: 20
Fifandrifian-javatra ve ny hoe ny fitafian'ilay "manam-pahaizana" mampahatsiahy ahy ny nanao gorila ??? Mbola azoko nankasitraka an'io vazivazy tsy misy dikany io :-p
« "Tsy mino ny New World Order" i Robert Jensen: manaporofo fa mpanohitra i Jensen.nl
Mampiseho ny UN manifesto '90: ny fepetra momba ny toetrandro noforonina hampihatra ny governemanta manerantany »
Total visits: 14.646.986
Martin Vrijland op Fantaro ny tantara mba hahalala ny fandaharam-potoana UNN 2030